उर्जा मन्त्रीबाट उद्गघाटन होइन, निरिक्षण भनेर दाङका प्रजिअले भन्नु भयो, सन्चारमाध्यममा आएको अनुसार उर्जामन्त्रीबाट भएकाे काम ‘आचारसंहिताको उल्लंघन’ होः मुख्य निर्वाचन अधिकृत थापा - जागरण अनलाइन
उर्जा मन्त्रीबाट उद्गघाटन होइन, निरिक्षण भनेर दाङका प्रजिअले भन्नु भयो, सन्चारमाध्यममा आएको अनुसार उर्जामन्त्रीबाट भएकाे काम ‘आचारसंहिताको उल्लंघन’ होः मुख्य निर्वाचन अधिकृत थापा
२०७६ कार्तिक २३, शनिबार ०९:२२
उपनिर्वाचन अनुगमन समितिकाे बैठक २५ गते बस्दै, आचार संहिता विपरितका कार्य नगर्न अपिल
निर्वाचन आयोगले मंसीर १४ गते हुन लागेकाे उपनिर्वाचनको तयारीमा जुटेकाे छ । आयोगले कार्तिक ८ गते शुक्रबारबाट लागू हुने गरी निर्वाचन आचार संहिता पनि जारी गरेको छ । उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा साे आचार संहिता लागू भएको छ । आचार संहिता लागू भएका जिल्लामा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक चासो र सरोकार राख्ने संस्था वा कार्यालयको उद्घाटन, शिलान्यास, अनावरण जस्ता कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउँदैनन् । यदि गरिए त्यो आचार संहिता विपरित ठहर्छ।
दाङमा पनि मंसीर १४ गते दुई स्थानमा निर्वाचन हुन लागेको छ । प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र ३(२) र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-१६ मा वडा अध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । प्रदेश सभाका लागि १२ वटा राजनीतिक दल तथा २ जनाले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गराई सकेका छन् । यस्तै, वडा अध्यक्ष पदका लागि कार्तिक २७ गते उम्मेदवारी दर्ता गराउने कार्यतालिका आयोगले जारी गरेको छ । यस बीचमा राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् । उनीहरूलाई आचारसंहिता विपरित प्रचारप्रसार नगर्न नगराउन निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सचेत गराएको छ ।
तर, शुक्रबार घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-३ झिङ्ग्नीमा रहेको लमही-घोराही १३२ केभी प्रशारण लाइन तथा घोराही १३२।३३ केभी सवस्टेशनको सरकारका उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनबाट विधिवत रुपमा एक समारोहका बीच उद्घाटन भएको छ । उक्त उद्घाटनको विषयलाई लिएर अहिले टीकाटिप्पणी भई रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापासँग
निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको बेला यस्ता गतिविधि गरिनु वाञ्छनीय हो ? यसले आचरसंहिताको सीमा नाघेको हो की होइन ? लयागत विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता कार्तिक ८ गतेबाट लागू भएको भनेर सबैमा सूचित गरेको थियो, आचार संहिता निर्वाचन हुने स्थानमा मात्रै लागू हुने हो की जिल्लाभर नै हो ?
होइन, यो स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहमात्रै लागू हुने हो । तर, दाङको हकमा कुरा गर्दा यहाँ प्रदेश सभाको पनि उपनिर्वाचन हुन लागेकाले आचार संहिता जिल्लाभर नै लागू भएको छ ।
निर्वाचन आचार संहिता जिल्लाभर लागू हुन्छ भने, शुक्रबार सरकारमा उर्जामन्त्रीबाट एक कार्यालयको उद्घाटन भएको छ, यो आचार संहिताभित्र पर्छ कि पर्दैन त ?
यो स्पष्ट रुपमा आचार संहित विपरितको कार्य हो । उपनिर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक दलहरुकै सहमतिमा बनाएर लागू गरिएको हो । आचार संहिता तयार गर्ने बेलामा सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहभागी गराएरै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको हो । जारी गर्ने आयोग भएपनि लागू गर्ने, परिपालना गर्ने त राजनीतिक दलहरु नै हो नी । यस्तै, समस्या नहोस् भनेर कार्तिक १४ गते मन्त्रिपरिषदका सदस्य, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलगायत सबैलाई भेला गराएर निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण पालना गर्ने गराउने सवालमा अभिमुखीकरण पनि गरेको थियो ।
सबैलाई सुसूचित गरिसकेको अवस्थामा, अझ भनौं, दाङकै हकमा पनि हामीले यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई कार्तिक २० गते सर्वदलीय भेला बोलाएर आचार संहिता पालना गरेर निर्वाचन सफल बनाउन अपिल गरेको हो । यसमा उनीहरुबाट प्रतिवद्धता पनि आएकै हो । तर, यस प्रकारका कार्यक्रम गर्दा सार्वजनिक चासोका संस्था वा कार्यालयले आधिकारिक जानकारी नदिँदा पनि समस्या भएको हो । मैले शक्रबार बेलुकी मात्रै संचारमाध्यमबाट यस्तो गतिविधि भएछ भन्ने थाहा पाएको हुँ ।
शुक्रबार भएकाे भनिएकाे विषयमा मलाई सबै जानकारी नभए पनि संचारमाध्यममा आएको गतिविधिले आचारसंहिताको उल्लंघन भएको देखाउँछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालसँग पनि घटनाको बारेमा मेराे कुरा भई सकेको छ ।
निर्वाचनको माहोलमा यतिबेला सबै राजनीतिक दल, तिनका प्रतिनिधि तल्लीन भइरहेका बेलामा आचार संहिता पालना गराउनेहरु जिम्मेवार तहबाटै उल्लंघन हुन भएको हो भने, यसलाई जिल्ला तहमा नेतृत्व वर्ग, उम्मेदवार, आम नागरिकले के बुझ्ने ?
यो विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएसँगै जिल्लाभर निर्वाचन नसकिउञ्जेसम्म आचार संहिता विपरितका कार्य कोही कसैले नगर्नु भनेर भनिएकाे छ । ठूला राजनीतिक दलहरु त झन नियम पालना गर्ने सवालमा उदाहरण बनि दिनुपर्छ, अरुले पनि यसको सिको गर्न सकून्, अनि मात्रै अनुशासनको पालना हुन्छ भन्नेमा उहाँहरु नै सचेत हुनु पर्ने हो ।
अब शुक्रबारको कुरा गर्ने हो भने पनि यस विषयमा मलाई सबै जानकारी नभए पनि संचारमाध्यममा आएको गतिविधिले आचारसंहिताको उल्लंघन भएको देखाउँछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालसँग पनि घटनाको बारेमा मेराे कुरा भई सकेको छ । उहाँले पनि मलाई यस विषयमा संस्थागत रुपमा कुनै जानकारी गराइएको छैन भन्नु भएको छ । यद्यपि, उर्जामन्त्रीले आफु सो स्थलको निरिक्षणको लागि मात्रै गएको भनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएको भन्नेसम्मका कुरा आएका छन् । तर, संचारमाध्यममा आएको उद्घाटन गरिएका तस्वीर र उहाँले कार्यालय उद्घाटन गर्दै गरेको गतिविधि आचार संहिता विपरित नै हुन् ।
आचार संहिता विपरितकाे काम भयाे भनी काेही कसैबाट लिखित रुपमा उजुरी पर्यो भने तपाईले के गर्नु हुन्छ ?
यस विषयमा जे भएको छ, मौखिक कुराले केही गर्न सक्ने अवस्था रहन्न, तर, कोही कसैबाट लिखित उजुरी आयो भने मैले सबै कुरा बुझेर जे भएको हो त्यो विवरण निर्वाचन आयोगमा लेखेर पठाइदिन सक्छु । हामीसँग यो भन्दा ठूलो संयन्त्र पनि छैन ।
के यस अघि सम्बन्धित कार्यालयले यहाँहरुसँग परामर्श गरेको थिएन ?
यही विषयलाई लिएर केही दिन अघि विद्युत कार्यालयका हाकीम ज्यूले मलाई फोन गरेर सोध्नु भएको थियो । उहाँले हाम्रो एउटा विद्युत कार्यालयको उद्घाटन गराउनु पर्नेछ । उर्जामन्त्री ज्यू र कार्यालका हाकीम आउँदै हुनुहुन्छ, यो बेलामा उद्घाटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएकै हो । त्यसबेलामा मैले मिल्दैन भनेर जवाफ दिएको थिए । यो बेला कुनै पनि हालतमा गर्न मिल्दैन भनेर सचेत गराएकै हुँ । यस्तो काम अहिले नगर्नुस, निर्वाचन सकिएपछि काम गर्नु होला भनेको थिएँ तर अचानक कसैलाई थाहा नै नदिई एकाएक उद्घाटन भएको भन्ने खबर थाहा पाएँ । स्पष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु, यो काम आचारसंहिताको उल्लंघन हो ।
अरुबाट पनि यस्ता खालका उल्लंघनका घटना बढ्दै गयो भने त , अवस्था असहज नबन्ला भन्न सकिन्न, आचार संहिता परिपालना पूर्ण कार्यान्वयन गराउन अब के गर्नु हुन्छ त ?
सायद सानो निर्वाचन क्षेत्र भएर होकी के हो कुन्नी ? निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मातहत अनुगमन अधिकृत राखिने गरिएको थियो। यसपटक राखिएको छैन । तर पनि, जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई यसको अधिकार दिइएको छ । साथै जिल्लामा उपनिर्वाचन अनुगमन समिति भनेर राखिएको छ । यसले निर्वाचन सम्पन्न गराउन भूमिका खेल्नेछ । यो समितिको बैठक पनि यही २५ गते बस्ने तयारी गरिएको छ । यसमा राजनीतिक दलहरु पनि सदस्य भएको हुँदा सबैलाई सहभागी हुन निम्तो पनि गरिसकेको छ ।
त्यहाँ यस विषयमा पक्कै पनि स्वाभाविक रुपमा कुरा उठ्नेछ । यस अघि पनि आचारसंहिताका विषयमा जानकारी गराएको हो । के गर्न हुने के नहुने सबै भनिएको छ । यस्ता गतिविधि पूर्ण रोकथाम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लागि परेको छ । समग्रमा हामी निर्वाचन सभ्य, भव्य र मर्यादित रुपमा सम्पन्न गराउने पक्षमा लागिपरेका छौं । यसमा सबैकाे सहयाेग अपरिहार्य छ ।